musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Singapore - Yangon ikozvino inoshandiswa neSilkAir
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Myanmar Breaking Nhau • nhau • Singapore Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
SilkAir, bapiro redunhu reSingapore Airlines, ichave ichitora kanokwana kashanu-vhiki nevhiki kuYangon, Myanmar, iyo irikushandiswa neScoot yebhasi yakaderera isingadhuri Scoot, kubva 29 Gumiguru 2017.
SilkAir inotoshanda nendege gumi dzisingamise vhiki kuYangon uye matatu masevhisi kuburikidza neMandalay muMyanmar. Nekuchinjiswa kweScoot's Yangon services, SilkAir ichawedzera mashandiro ayo eYangon kune gumi nemashanu masevhisi asingamise pavhiki. Kambani yemubereki Singapore Airlines zvakare inoshanda masevhisi ezuva nezuva kuYangon.
Vaenzi vane mabhuku aripo paScoot's Yangon masevhisi uye uye uye mushure ma29 Gumiguru 2017 vachazogariswa paSilkAir. Ivo vanogashira ruzivo rwekutsva kwavo kutsva neemail kana iyo yekugara-zvakare yapera. Vashanyi vanosarudza kukanzura matsamba avo vanogona kusarudza kudzoserwa kuzere kwetikiti ravo. Scoot vashanyi vanoda rubatsiro vanogona kubata iyo Scoot kufona nzvimbo.
"Kuendeswa kweScoot's Yangon services kuSilkAir kuchakwidziridza mashandisiro enhandare mukati meSingapore Airlines Group uye kusunungura zviwanikwa zveScoot kune mamwe marongero ekuvandudza network," akadaro Mr. Lee Lik Hsin, Scoot CEO.
"Tinotarisira kupa vatengi vedu dzimwe ndege dzekuenda kuYangon, kuzadza neruzivo rwedu rwesevhisi, kusanganisira mari yemubhadharo, kupa chikafu uye kuvaraidza kuburikidza neSilkAir Studio yedu," vakadaro VaFoo Chai Woo, Chief Executive SilkAir.
Nekuchinjisa, Scoot haichazoshandira kuMyanmar uye netiweki yayo inozosvika nzvimbo makumi matanhatu munyika gumi nenhanhatu. Scoot yakanga yazivisa kare kuti ichatanga mabasa akarongwa kuKuching musi wa60 Gumiguru 16, Honolulu musi wa29 Zvita 2017 uye Kuantan musi wa19 Kukadzi 2017. Scoot ichaisawo ndege dzenguva dzinoenda kuHarbin kutanga kubva 2 Zvita 2018, uye kuwedzera mwaka usingamise Singapore -Sapporo ndege (mukuwedzera kune aripo gore-kutenderera eSingapore-Taipei-Sapporo ndege) kutanga kubva 1 Mbudzi 2017.